Sawirro: Qarax la dhigay dhinaca wadada Maka Almukarrama oo la fashiliyey – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Ciidamo katirsan Nabad Sugida Qaranka ayaa maanta xiray inta u dhaxeysa Isgoosyada Dabka iyo Sayidka ee Laamiga Maka Al-Mukarama, kadib markii la arkay bac ay ku jiraan walxaha qarxa oo la dhigay laamiga dhiniciisa.
Dadka iyo gaadiidka ayaa laga joojiyey wadada, waxaana la xiray dhamaan goobaha ganacsiga ee ku dhawaa halka lagu arkay bacda laga shakiyey.
Markii dambe waxaa goobta gaaray ciidamo qaabilsan Miinooyin iyo waxyaabaha qarxa, kuwaasoo ku guuleestay in ay qarxiyaan Miino bac lagu soo riday oo lasoo dhigay Laamiga Maka Al-mukarama gaar ahaan agagaarka Hotel Wehliye.
Miinada la qarxiyey ayaan geysan wax khasaare, waxaana wadada dib ugu soo laabtay isu socodkiid gaadiidka iyo dadweynaha oo saacado xanibnaa.
Ciidamada booliiska iyo kuwa Nabad Sugida Dowlada Soomaaliya ayaa marar badan ku guuleestay in ay fashiliyaan qaraxyo miino iyo kuwo gawaari lagu soo xiray, waxaana Qaraxyada inta badan ka dhaca Muqdisho qasaaraha ugu badan kasoo gaartaa dad rayid ah.